Daawo: muuqaalka: Guddiga farsamada shirka maamul u sameynta gobbolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa maanta shaaciyay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu magaalada Kismaayo imaan doono Ra’iisul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya |
Daawo: muuqaalka: Guddiga farsamada shirka maamul u sameynta gobbolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa maanta shaaciyay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu magaalada Kismaayo imaan doono Ra’iisul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya
Waxgaradka gacanta ku haya shirka maamul u samaynta gobolada Jubooyinka iyo Gedo ee ka socda magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sheegayaa in maanta shir ay isugu yimaadeen.
Shirka ayaa waxa uu ahaa isbarasho ergooyinka ka kala yimid gobolada Jubbaland iyo qurbajoogta waxaa kaloo looga arinsanayey sidii ay R/W Saacid ugu soo dhaweyn lahaayeen shirka Kismaayo.
Macalin Max’ed Ibraahim oo ah gudoomiyaha gudiga farsamada maamul u samaynta Jubaland ayaa sheegay in shirka maanta looga arinsaday dardar galinta shirka ka socda magaalada Kismaayo ee maamulka loogu samaynayo gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Kulanka maanta ay yeesheen hawlwadeenada shirka maamul u samaynta Jubaland ayaa waxaa sidoo kale la iskula soo qaaday soo dhaweynta R/wasaaraha xukuumada Soomaaliya oo lagu wado inuu gaaro magaalada Kismaayo maalinta sabtiga ah ee soo aaddan.
R/wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon Saacid ayaa la filayaan inuu door ku yeesho hogaaminta shirka maamul u samaynta Jubaland ee ka socda magaalada Kismaayo wararka aan ka heleyno magaalada Kismaayo ayaa ku waramaya in dowlada Soomaaliya ay wax badan ka tanaasushay waxaana muuqata in madaxda dowladda iyo madaxda shirka Kismaayo ay gaareen is afgarad oo ku saabsan doorka dowlada Soomaaliya ku yeelan doonto shirka maamul u sameynta gobolada hada la isugu yeero Jubbaland.
Dowlada Soomaaliya ayaa hore dhowrb jeer sheegtay fikirkeeda ku saabsan shirka maamul u samaynta jubaland waxayna ku tilmaantay mid aan sax ahayn oo loo maray wado qaldan iyadoona gaashaanka u daruurtay balse waxaa hada muuqata in isfaham buuxa uu dhexmaray waxgaradka ku hawlan shirkaas iyo madaxda ugu sareysa dowlada Soomaaliya.